မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVII
Posted by Kyaemon on Jun 4, 2017 in Business & Economics, Education, Think Tank |2comments
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၄၆ XLVI မှအဆက်
ခုထက်ထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက မ လုံလောက်သေးပါ၊ မကြာ ခဏလဲမီးပျက်လို့
အဲဒီတုံးက GE Generators ဂျဲန်နရေတာ အကြီးစားတွေကို ကမန်းကတန်းမှာယူပြီး၊အမြန်လေယာဉ်
နဲ့တင်သွင်းခဲ့တယ်၊လေးလဲလေး လယာဉ်နဲ့ဆိုတော့ ဘဏ္ဋာတော် တာ်တော်ထိခိုက်ခဲ့မှာပါ၊
သင်ခဏ်းစာယူစရာပါ၊ ၂၀၃ဝ မှာ လင်းစေဘို့ဂတိတည်နိုင်ပါ့မလား?
ဘယ်တော့ခါမှာဝဋ်ကျွတ်နိုင်မယ်ကိုလူတွေကတ “ခါခါမော့ ”
ကယ်စရာမလို သူ့ဟာသူအဆင်ပြေပုံမှန် စီးဆင်း နေမဲ့ဧရာဝတီကိုကျတော့ကယ်ပါ ကယ်ပါ နဲ့
့တောကြောင်တွေက အလှန့်တကြားဖြစ်အောင် လုပ်ကြံလှုံ့ဆော်ကြတယ်၊
သူများတွေကို အိုးမဲလိုက်သုတ်ပြီးရန်ထောင် ကြတယ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မ ရ အောင် မြစ်ဆုံရေကာတာ
ကိုလိုက်ပိတ်တယ်၊ကုန်ကျစားရိတ်ကြီးတဲ့အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နည်းဘက်ကိုရှုပ်ထွေးဧဘောင် တွန်းပို့တယ်၊
အမှန်မှာ အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ မိဘပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ဘို့ပါ၊
အမိဧရာဝတီကို ကယ်တင်စရာမှ မလိုပါ၊အလုပ်မဖြစ်အောင်လမ်းချော်ရအောင်လုပ်နေတာပါ၊
“ဆရာရယ် ဒီတကြိမ်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ ချမ်းသပေးပါ၊ဆရာတို့လဲကုသိုလ်ရမှာပါ၊
မလို၊စိတ်မလုံ လိပ်ပြာမလုံ အာဘတ်မကင်း စရာGuilty Conscience တွေမလို စိတ်သန့်သန့်ဘဲ ဆရာရယ်၊
ဆရာတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘဲအကျိုးရှိရှိနဲ့ သုံးနိုင်တာဘဲ ဆရာရယ်၊”
“မလုပ်ပါရစေနဲ့၊ လူလူချင်းစာနာပါ ဆရာရယ်”
အထင်အမြင် မ လွဲရအောင် အနောက်နိုင်ငံ အစိုးရတွေမီဒီယာတွေကိုလိုအပ်ရင်
“ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုး နိုင်ငံရဲ့အကျိုးNational Interests ကိုဦးထိပ်ပန် ရည်စူးပြီးလုပ် ခွင့်ပေးတာပါ”
( Nixon, Kissinger တို့ပြောဘူးကြတဲ့စကား)
By Htoo Aung with AFP | Monday, 28 May 2012
Hundreds of people took to the streets of downtown Yangon last week for candelight demonstrations over electricity shortages, as protests that began in Mandalay on May 20 spread to other regional centres.
On May 22, about 150 people gathered at Sule Pagoda at 7pm fora30-minute demonstration that was watched by about 1000 more. The demonstrators lit candles and entered the pagoda’s southern entrance before walking around the 2500-year-old landmark before dispersing peacefully at the request of police.
“The people have showed their needs and demands. How is [the government] going to solve this? We want an explanation,” said Ko Wailu, who took part in the first day of the protest.
“The government that accedes to the demands of the public will be loved. If they don’t accede, they will be judged by the public,” he added.
The demonstration was repeated on May 23, 24 and 25 with larger numbers of participants, prompting the government to warn protesters to stay within the law.
“It is usual inademocratic country that people express their desire by protesting. But they need to be lawful,” presidential adviser U Ko Ko Hlaing toldapress briefing on May 24.
“They can protest to the extent that the law permits. According to the law, if they want to protest they need to inform the police station and get permission.”
Demonstrations also occurred in Bago and Monywa, residents said. On May 21, about 100 people protested in Monywa, with almost 500 demonstrators gathering the following evening, watched on by several thousand people.
ြမစ်ဆုံရပ်ဘို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့အရင်းအမြစ်က ကချင်လူမျိုးစုကို သူတို့ ရသင့်ခံစားသင့်
တဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုမပေးလို့ဘဲမြင်ပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်Gun Maw ကစစ်အစိုးရကို၎င်းအတွက်ဆွေးနွေးဘို့
The demonstrations were sparked by power shortages that began on May 19 after transmission cables from the Shweli hydropower project were damaged. The government said last week that Kachin Independent Army insurgents were responsible for the May 18 attack.
Ko Kyaw Kyaw,a35-year-old Mingalar Taung Nyunt resident who joined the demonstration on May 23, said the poor electricity supply made life extremely unpleasant. “If the electricity doesn’t come, it is hard to get the water we need to wash, cook and drink. I will only stop the campaign when electricity comes,” he said.
More powercuts forecast for Yangon
By Ye Mon | Wednesday, 19 October 2016
Get ready for the blackouts. A regional minister has acknowledged that decayed powerlines andasurging demand for electricity will once again leave the commercial capital in the dark.
￼Decayed power lines hamper efficient transmission, contributing to the blackouts. Photo: Aung Khant / The Myanmar Times
Yangon Electricity Supply Corporation had hopedahandful of patchwork measures would help boost the supply but the lofty targets and mercurial promises of no more cuts have again evaporated in the face of the daunting task.
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချို့တဲ့မှု မ လုံလောက်မှုတွေကြောင့်
Burma’s power supply problems hurt growth
Press enter to return or tab to continue.
Burma, also known as Myanmar, wants to entice foreign investors but unreliable energy supplies areabig problem.
The opening up of Burma’s economy has generated feverish excitement among international investors.
Withapopulation of 60 million,awealth of natural resources, andaneed for just about everything, Burma, also known as Myanmar, is one of the world’s last untapped markets.
And yet, while foreign direct investment has increased substantially since most sanctions were lifted last year, the amounts of real money arriving in the country are far smaller than Burma’s needs and nowhere near the impressive numbers being talked about.
Over two-thirds of the country does not have access to electricity
Kanthan Shankar, World Bank
They will be crucial job-creators in this early stage of Burma’s development and they say power – or the lack of it – is one of their biggest concerns.
All those decades of isolation have left the country’s infrastructure in terrible shape.
There is no national grid and 70% of what power there is, comes from hydroelectric dams.
တနိုင်လုံးသုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအားပေါင်းရဲ့ ၇ဝ %က ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအား ဖြစ်လို့
A few months into the dry season, capacity drops sharply, resulting in frequent and long-lasting power cuts.
Per capita power consumption is only one-sixth of that in Indonesia, and one-20th of Thailand’s.
အင်ဒိုနီရှားရဲ့ ၆ ချိုးတချိုး၊ယိုးဒီယားရဲ့ ၂ဝ ချိုး တချိုး ဘဲလျှပ်စစ်အားကိုသုံး
“Over two-thirds of the country does not have access to electricity,” says Kanthan Shankar, the country manager for the World Bank.
“In rural areas it’s less than 16%. So there’sahuge need.”
So the World Bank’s first funding project since it returned to Burma last year is, unsurprisingly, to help the government upgrade an old power-station in Thaton, south of Rangoon, also known as Yangon.
(ဓာတ်အားမရလို့တနှစ်မှာ ၄ လ လောက် Generators သုံးတာ အ
ရှုံးပေါ်၊ကြာရှည်မရပ်တည်နိုင်၊အလုပ်သမား ၁၅၀ဝ ရှိ)
ြမန်မာက ဂျပန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကို “အာလူးNato တွေပါ” လို့ခေါ်ဆိုသမုတ်ကြောင်း Jetro Takahara ကပြော
The Burmese call us Nato. “No Action, Talk Only. ”
the ‘four Ls’ – Look, Listen, Learn and Leave
( လာကြည့်၊နားတောင်၊လေ့လာပြီးပြန်သွား “L” လေးလုံး)
Masaki Takahara, Jetro
The biggest proposed investments are coming from Japanese companies, eager to make up for the lost years of sanctions when they had to watch arch-rival China become Burma’s top trade and investment partner.
“The Burmese call us Nato,” says Masaki Takahara, head of the Rangoon office of Japan External Trade Organization (Jetro).
“No Action, Talk Only. Or the ‘four Ls’ – Look, Listen, Learn and Leave.”
ကိုဝင်ပြီး၊ရေကာတာပုံကိုရှာပါ၊၎င်းပုံအောက်နားက”kကြိုက်” “Likes” ကိုနှိပ်ပေးပါ၊ကျေးဇူးပါ၊
222K726560224K ကိုကို ခိုင်ထူး, Ko Ko and 224K others
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာခက်အောင်အား ယင်းသစ်မှောင်ခိုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာ ယင်းမှောင်ခို ကိစ္စရပ်များကိုသိရှိကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြထားကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ကြာပါပြီ။ ဒီဒေသမှာက သစ်မှောင်ခိုထွက်တာ ရိုးနေပါပြီ။ မြန်မာဘက်မှာ သစ်ဖမ်းရင် တရုတ်တရား ဝင်ဂိတ်ပေါက်က မြန်မာပြည်ဘက်က ထွက်တဲ့ကြံ၊ စပါး၊ ပြောင်းတွေကို ပိတ်ပြန်ရော။ ဒေသခံကဒုက္ခရောက်ပြန်ရော။ အဲဒီလိုလုံးချာ လိုက်နေတာ” ဟု ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သစ်မှောင်ခို သယ်ဆောင်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံစစ်တပ်သုံး (ယန်းဖောင်) (အက်ဖိုး) ကားအကြီးစားများဖြစ်ပြီး တန်ချိန် ၂ဝ ကျော်ကို အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ ယင်းမော်တော်ယာဉ်များ ရောက်ရှိလာသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံအရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက် အရာရှိများနှင့် ဆယ်နွှယ်နိုင်ကြောင်း၊ သစ်မှောင်ခို ကိစ္စရပ်များကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ၊ လူမှုစီးပွား ပြဿနာများကြီးထွားနေကြောင်း ပြောကြားသည်။